Tetik'asa tsara indrindra amin'ny 24 Dog Tattoos ho an'ny lehilahy sy vehivavy - tetikasam-borona
Tetik'asa tsara indrindra an'ny 24 Dog Tattoos ho an'ny lehilahy sy vehivavy
sonitattoo Novambra 16, 2016
Efa nahita olona tamin'ny karazana tatoazy ve ianao? Nandritra ny taona maro, maro ireo olona izay vaovao amin'ny raharaham-barotra amin'ny fanaovana tatoazy dia tsy sahy naneho ny tetikasany. Androany, mahita olona an'arivony maro no mivoaka amim-pahasahiana amin'ny tatoazy mahatalanjona.
1. Tato anaty alika
Ny anton'ny fampitomboana ny teti-panorona #dog dia noho ny fahaiza-mamorona ny an'ireo izay mamolavola azy. Tsy afaka ny ho tia azy fotsiny ianao.
3. Hazo tato anaty
Ho an'ny olona maro, ny fahazoana an'ity alika #tattoo ity dia lasa fomba iray hanehoana ny zavatra inoany na te-hanatratra azy. Rehefa mahazo tatoazy izy ireo, dia hampahatsiahy azy ireo fa nahavita na nahatratra ny zavatra nananany izy ireo. Tsy mieritreritra an'izany ve ianao?
4. Tato anaty alika
Nahita olona manenina ny mahazo tatoazy izahay satria tsy voaomana alohan'ny haniriany izany. Na dia izany aza, tato ho an'ny alika ny tongotra dia ho lasa zavatra izay tianao.
5. Sexy tatoo
Misy safidy maro ahazoana tattoos lehibe. Ny vehivavy dia tia ny tato an-dalamby an-tsokosoko izay mety ho marika entina hanamboarana ny biby fiompiny.
Ny tato anaty alikan'ny sandry dia afaka hidera fotsiny ary ho tia kokoa raha mihevitra ny hahazo zavatra tena lehibe.
7. Tattoo dog dog
Misy fomba maro hanaporofoana fa tia ny alikanao biby ianao ary izany dia amin'ny fisisihana ny tato an-tadiny amin'ny alika amin'ny tongotrao.
8. Tattoo Super dog
Tattoos tsara tarehy toy izany dia mafana. Raha mahita olona miaraka amin'ity karazana tatoazy ity ianao, dia tena tianao izany.
Ny teknolojia izay ampiasaina amin'ny fahazoana an'io tatoazy io amin'ny vehivavy dia mahatalanjona. Ny ankizivavy dia mankafy ity karazana tatoazy ity.
10. Tato an-tserasera
Raha mitady tattoos tsara tarehy sy mamorona ianao amin'ny maha-reny na lehilahy anao, ataovy izay hahazoanao asa avy amin'ny tatoazy efa za-draharaha izay afaka manampy ny asa vita.
11. Tato an-dalamby mamy
Ny fotsy maitso sy manga dia azo ampiasaina amin'ny tato an-tsainao. Maro ny fomba ahafahanao mahazo tato anaty alika mahafinaritra ary fomba mahagaga fotsiny.
12. Hazo tato anaty
Ny tati-tsarim-baventy mahafinaritra amin'ny olona dia tena mahafinaritra ary mety ho sarotra aminao ny mahita antony iray tsy tokony hataonao eo amin'ny sandrinao.
13. Tato an-tselika tsara tarehy
Raha mieritreritra ny hahazo tatoazy ianao dia tokony haka fotoana mba hahazoana antoka fa manana tatoazy tsara indrindra ianao. Ny feny dia mety ho toerana tsara indrindra ahafahanao mahazo tatoazy.
14. Tato an-tadin'ny omby
Ny tato an-dalan'ny omby iray dia lasa izay tiany ho an'ny olona noho ny hatsaran-tarehiny mifatotra aminy. Misy fomba maro ahafahanao mampifanaraka ny tato an-tsainao amin'ny alikao. Ny fampiendrehana ny tatoazy dia ny ambaratonga manaraka amin'ny fanoratana. Ny antony mahatonga anao hahita #designs sy ny fitiavany azy dia noho ny fomba amam-panao azy.
15. Tato anaty alika maoderina
Ianao no manapa-kevitra amin'ny karazana tato-tsavona tadiavinao izay ilainao. Rehefa tonga amin'ny fanaovana tatoazy ny alika, tokony hiezaka ny hanao fikarohana ianao alohan'ny alahan'io tatoazy io.
16. Tato an-jazakely vavy
Tsy ny trano fanao tattoo ihany no tokony hitranga aorian'izay rehefa mitady tato-boninahitra vehivavy. Ilay mpanakanto dia ny zavatra voalohany tokony hitandremanao. Amin'ny maha-vavy anao dia mila ny tattoo tsara indrindra ho an'ny vehivavy ianao.
17. Back tattoo dog
Raha ny trano fidiovana tsy dia tsara sy mendrika, dia mety ho traikefa mampihoron-koditra ny fahazoana tatoazy. Izany no mahatonga ny olona mangataka foana ny karazana trano fanao tiany indrindra indrindra.
18. Tena tato ho an'ny alika
Ilay artista izay hanao ny sarimihetsika tena alika dia lafiny manan-danja amin'ny tatoazy. Raha tsy tsara na mahay ny mpanakanto dia mety ho sarotra ny hahazo an'io tatoazy io.
19. Tattoo dog thigh
Maro ireo mpanakanto maro an-tserasera no misafidy raha toa ka tonga amin'ny fananganana tatoazy. Ny fomba tsara indrindra hahazoana mpilalao mahay dia ny fametrahana fanontaniana. Ny aterineto dia nahafahanao namorona ny mpanakanto tsara indrindra ho anao amin'ny maha-vehivavy anao.
20. Tato an-tsela mafana
Rehefa mahazo mpanakanto ianao, ny zavatra manaraka azonao eritreretina dia ny fametrahana ny tato amin'ny alikao. Tena ilaina ny fametrahana tato anaty alika. Raha misy tato ho an'ny tatoazy, mety ho sarotra aminao ny manao an'ity tatoazy mahagaga ity.
21. Tato an-tsehatra hendry
Jereo ity tontolon'ny alika tatoazy ity ary jereo ny fomba ahafahanao manitsy ny endriny manokana. Ny endriky ny tatoazy alikao dia zavatra tokony hoeritreretinao aloha alohan'ny ahafahanao manoratra. Rehefa manana an'io fikandrana io ianao, dia ho mora kokoa aminao ny hahazo an'io karazan'entana io.
22. Tattoo mahagagny mahagaga
24. Tainkintana telo Tattoo Design Idea
masoandro tatoazyrip tattoostattoo eyetattoosraozy tatoazyTatoazy ara-jeometrikaanjely tattoostattoos mahafatifatyhenna tattootattoos rahavavycompass tattooHeart Tattoosmehndi designtattooslion tattoosarrow tattootattoos armelefanta tatoazytattoo ideaskoi fish tattoomozika tatoazytattoos ho an'ny lehilahymoon tattoostattoos crossscorpion tattooloto voninkazoTattoo Feathertattoos voronatattoos backtattoo infinitytato ho an'ny vatofantsikatattoo octopuscat tattoostatoazy fokonamana tattoos tsara indrindraeagle tattoostratra tatoazytatoazy ho an'ny zazavavyfitiavana tatoazyAnkle Tattoostattoos sleevetatoazy voninkazotattoo watercolortanana tatoazytattoos mpivadytattoos foottatoazy loloNy zodiaka dia mampiseho tatoazydiamondra tattootattoo cherry blossom